Zimbabwe and Equatorial Guinea sign energy deal — Alexander's Gas and Oil Connections
Zimbabwe and Equatorial Guinea sign energy deal
Zimbabwe and Equatorial Guinea signed an energy trading agreement.
The Zimbabwean government has stressed that the agreement was "purely commercial" and was not linked to the possible extradition of Simon Mann, a Briton currently imprisoned in Zimbabwe over a foiled bid to topple the government of Equatorial Guinea.
"Equatorial Guinea and Zimbabwe have signed a purely commercial agreement for energy resources, to be bought and sold at market rates," the government said.
Zimbabwe frequently suffers fuel shortages and the deal would give the country strategic access to Equatorial Guinea's oil. However, Zimbabwe has no capacity to refine crude oil.
Source: Business in Africa